Bilyaneer dayaxa dalxiis u aadaya oo baadi goobaya qalanjadii safarkiisa ku wehlin lahayd
Mogadishu - 21:20:31
Tuesday January 14, 2020 - 22:16:01 in Wararka by Super Admin
Bilyaneerka weyn ee waddanka Japan Yusaku Maezawa oo isku diyaarinaya in uu dalxiiskii ugu horreeyay dhinaca dayaxa ugu baxo ayaa sheegay in uu baadi goobayo gabar ku haboon (gacalisadiisa) safarkaasi ku wehlin lahayd.
Ganacsadahan ayaa ka taajiray dharka, waana aas aasaha Zozotown oo ah barta ugu weyn Japan ee dharka ku iibisa internet-ka, waxaana hantidiisa lagu qiyaasay 3.6 bilyan oo dollar, isagoo howsha ganacsiga dharkana bilaabay sanadkii 2004.
Maanta calaamadaha ganacsiga ee uu iibiyo waxay marayaan 7,300 iyo dhar gaaraya 730,000 oo naqshadood, waxaana suuqyadiisa lagu iibiyaa dharka Japanese-ka iyo kuwa reer galbeedkaba.
Mr. Maezawa oo jecel adeegsiga Twitter-ka ayaa waxa uu leeyahay 7 milyan oo taageerayaal ah oo halkaa kala socda qoraalladiisa, waxaana uu boggiisa soo dhigay cinwaan uu ku leeyahay ‘kaalay dayaxa ii raac’ isagoo sheegay in uu qabanayo arjiyada, go’aanka kama dambeysta ahna gaari doono dhammaadka Maarso, 2020 si uu u doorto gabadhii dayaxa u raaci lahayd.
Waa 44 jir, waxaana uu leeyahay 3 carruur ah, hase yeeshee xaaskiisii ugu dambeysay ee Ayame Goriki waxa ay ku kala tageen markii ay diidday in ay safarkaasi dayax gacmeedka ah ku wehliso.
Shuruudaha haweeneyda uu baadi goobayo ma ahan mid dhib badan, waxaana ka mid ah inay tahay 20 jir ama xoogaa ka sarreyso, inay leedahay shaqsiyad wanaagsan iyo iyo inay ku qanacsan tahay inay dayax dayaxa u raacdo noloshana ku wada raaxeystaan, waxaana safarkiisu qorsheysan yahay 2023.